Date: October 7, 2018Author: Rahul0Comments
“Lactogrow3comes withanew premium look and better packaging quality. The price is the same as before but we’re aiming forabetter quality product with affordable prices for our consumers in Myanmar,” said Ms Capanzana Michelle Ailah, Business Manager (NIN) of Nestlé Myanmar Limited.
“It will be available for consumers from early October onwards in the local markets including supermarkets, pharmacies and retail stores nationwide,” she said.
“The new Lactogrow3is the affordable choice of growing up milk formula for children above two years old. Accompanied by its new look and improved taste, it contains DHA, Probiotics L.comfortis, HappyNutri, Calcium and no added Sucrose. DHA needs for the eyes and brain development,” said U Win Pyae Kyaw, Brand Manager of Nestlé Myanmar.
To participate in the program, people need to buy Lactogrow 3, scratch it and send the code number from the boxes to 09 4444 54547, 09 4444 54549 forachance to wina“Lactogrow3Grow Happy” trip to Bangkok’s Dream World in October, Singapore’s Universal Studios in November and Hong Kong’s Disney Land in December. Other prize wins includeafree mobile top-up orachance to win monthly consolation prizes such as the free entrance to Yangon Waterboom to enjoy with your family.
Lactogrow3aims to support children to grow happy by providing balanced nutrition andahappy environment.
The event features many activities for the children including colouring contest, kid talents program, and entertainment program followed byapanel discussion titled “Grow Happy” on how children need to grow both physically and mentally by retired Prof. Daw Thet Htar Win, Dr Daw Win Win Myint, Actress Melody and G-Six Beauty Spa founder Ma Thae Thae.
Nestlé is the world’s largest Food and Beverages Company, headquartered in Switzerland. Nestlé is present in 191 countries around the world and our 328,000 employees are committed to Nestlé’s purpose of enhancing the quality of life and contributing toahealthier future. Our performance is driven by our Nutrition, Health and Wellness agenda. We have been nourishing consumers globally through our quality brands and products for over 150 years.
Nestlé မှ Lactogen3ကို Lactogrow3ဟူသော အမည်ဖြင့်အဆင့်မြင့် ပုံစံအသစ်နှင့် ပြန်လည်မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – နက်စလေ(Nestlé) မှ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော Lactogen3နို့မှုန့်ကို Lactogrow3ဟူသော အမည်ဖြင့် အဆင့်မြင့် ပုံစံအသစ်နှင့် ထုတ်လုပ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ဤအမှတ်တံဆိပ် ပြောင်းလဲမိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ Melia Hotel တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး Nestlé Myanmar Limited ၏ မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ မစ္စတာ ဒပ်(ဖ်)ရင် (Mr Hayri Devrim Cobek) မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြသော ဧည့်သည်တော်များကို ကြိုဆိုခဲ့သည်။
“Lactogrow3က အထက်တန်းကျတဲ့ အဆင့်မြင့်ပုံစံသစ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ ထုတ်ပိုးမှု အရည်အသွေးနဲ့ စားသုံးသူတွေဆီ ရောက်လာပါပြီ။ ဈေးနှုန်းက အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ကျွန်မတို့ စားသုံးသူတွေအတွက် သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေး ပိုကောင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ကိုပဲ ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင် ကျွန်မတို့ ရည်မှန်းကြိုးစားနေပါတယ်”ဟု Nestlé Myanmar Limited ၏ Business Manager (NIN) ဖြစ်သူ မစ္စစ် မိုင်လာ (Ms. Capanzana Michelle Ailah) မှ ပြော ကြားခဲ့သည်။
“ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ Lactogrow3ကို အောက်တိုဘာ လဆန်းမှ စတင်ပြီး မြန်မာ တစ် နိုင်ငံလုံးက စူပါမားကတ်တွေ၊ ဆေးဆိုင်တွေနဲ့ အရောင်းဆိုင်တွေ အပါအဝင် ဈေးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပါပြီ” ဟု ၎င်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Lactogrow3တွင် L.COMFORTISTM သည် (၂)နှစ်အထက်အရွယ် သင်၏ကလေးအတွက် ညီညွတ်မျှတစွာ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော နို့မှုန့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအသစ်မွမ်းမံထားသော ဖော်စပ်မှုတွင် သင့်ကလေး၏ တစ်နေ့တာအား ပျော်ရွှင်စွာ စတင်စေနိုင်မည့် မှန်ကန်သော အာဟာရ ပေါင်းစပ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။
Lactogrow 3, HappyNutri တွင် L.Comfortis တစ်နည်းအားဖြင့် လတ်တိုဘက်ဆစ် လပ်ရုတရိုင်း ကဲ့သို့ ခန္စာကိုယ် အတွက် အကျိုးပြု အာဟာရ ဓာတ်များ ပါဝင်ခြင်း ကြောင့် သင့်ကလေးငယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အစာချေစနစ်ကို အထောက်အကူပြုပြီး ဝမ်းဗိုက် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းအား လျော့ကျစေကာ သက်တောင့်သက်တာ ရှိစေပါသည်။
Nestlé Myanmar ၏ Brand Manager ဦးဝင်းပြည့်ကျော် မှလည်း “Lactogrow3အသစ်က အသက် ၂ နှစ်နဲ့ အထက်ကလေးငယ်တွေအတွက် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အကူပြု နို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံအသစ်နဲ့ အရသာပိုကောင်းလာတဲ့အပြင် သူ့မှာ DHA, Probiotics L.comfortis, HappyNutri, ကယ်လ်စီယမ် စတာတွေလည်း ပါဝင်တယ်။ ကလေးငယ်တွေရဲ့အမြင်အာရုံ နဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် DHA လိုအပ်ပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်က အရိုးနဲ့သွားတွေ ခိုင်မာအောင် ကူညီ ပေးပြီး HappyNutri မှာတော့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ် ၁၅ မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိုဓာတ် ထပ်ထည့်ထားခြင်း မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ကလေးငယ်တွေ အကြားမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံ အလေ့အထတွေ ဖန်တီးထူထောင် ပေးပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Lactogrow3ကို စားသုံးသူများ စိတ်ကြိုက် ၆၀၀ ဂရမ်ဘူးများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် အမှတ်တံဆိပ် ပြင်ဆင် မိတ်ဆက်ခြင်းကို ကျင်းပဆင်နွှဲသည့်အနေဖြင့် Nestlé Myanmar မှ နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ် အပါအဝင် အခြားဆုမဲပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည့် အထူးစပါယ်ရှယ် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်ကို မိသားစုများအတွက် ယခုပြုလုပ်ေပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုပါက Lactogrow3ကိုဝယ်ယူကာ ခဲခြစ်ပြီး ဘူးပေါ်မှ ကုဒ်နံပါတ်ကို ဖုန်းနံပါတ် 09 4444 54547 နှင့် 09 4444 54549 တို့ကို စာတို ပေးပို့ပြီး ကံစမ်းရုံဖြင့် အောက်တိုဘာလတွင် ဘန်ကောက် ရှိ Dream World, နိုဝင်ဘာလတွင် စင်ကာပူမှ Universal Studios နှင့် ဒီဇင်ဘာတွင် ဟောင်ကောင်ရှိ Disney Land အစရှိသော နေရာများကို မိသားစုလိုက် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မည့် ခရီးစဉ်များကို ကံထူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆုကြီးများအပြင် အခြားဆုမဲများအနေဖြင့် အခမဲ့ ဖုန်းဘေလ်များ သို့မဟုတ် ရန်ကုန်မြို့ Waterboom ကို မိသားစုနှင့်အတူ အခမဲ့သွားရောက် လည်ပတ်ခွင့် စသော လစဉ်ဆုမဲများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
• Lactogrow3သည် မျှတသော အာဟာရနှင့် ပျော်ရွှွှင်ဖွယ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်များ ပျော်ရွှင်စွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကူညီထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
• အကြောင်းရင်းမှာ ယနေ့ပျော်ရွှင်မှုသည် ကလေးငယ်များ အနာဂတ်ပျော်ရွှင်မှုများ၏ ကနဦးအစပင် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
• “ကျန်းမာဖွံဖြိုး လက်တိုဂရိုး”
အခမ်းအနားတွင် ဆေးရောင်ခြယ် ပြိုင်ပွဲ၊ Kid talents အစီအစဉ်၊ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များ၊ အပြင် အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဆရာမကြီး ဒေါ်သက်ထားဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီနှင့် G-Six Beauty Spa တည်ထောင်သူ မသဲသဲတို့မှ “Grow Happy” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကလေးငယ်များ မည်ကဲ့သို့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ကြောင်းကို စကားဝိုင်းဖွဲ့ ဆွေးနွေးသွားမည့် အစီအစဉ် များအပြင် ကလေးငယ်များအတွက် အစီအစဉ်များစွာ ထည့်သွင်း ကျင်းပခဲ့သည်။
Nestlé သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိထားသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အစားအသောက်နှင့် အဖျော် ယမကာ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အနှံ့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၁ နိုင်ငံတွင် Nestlé တည်ရှိပြီး ပိုမိုကျန်းမာသော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးထူထောင်ရန်နှင့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံများကို အရည်အသွေး မြင့်တင်ရန်ဖြစ်သော Nestlé ၏ ရည်မှန်းချက်ကို ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် Nestlé ၏ ဝန်ထမ်း ပေါင်း ၃၂၈,၀၀၀ ကလည်း ကတိ ကဝတ် ပြုထားကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာဟာရ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာခြင်းကဏ္ဍများ အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့မှ စားသုံးသူများကို ကျွန်တော်တို့၏ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များဖြင့် အာဟာရ ဖြည့်တင်းပေးနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ Lactogen3သည် ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Nestlé Myanmar Limited ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ MDG (Myanmar Distribution Group) နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ Nestlé သည် NESCAFÉ, MILO, BEAR BRAND, MAGGI, LACTOGEN နှင့် CERELAC အစရှိသော အရည်အသွေးမြင့် အမှတ်တံဆိပ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းချ ပေးလျက်ရှိသည်။
FamilyLactogrow3LycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyNestleNestle MyanmarNutritionPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon